Fritzon oo ka baaqsatay kulan wasiirka dhiggeeda ee Noorway - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiiradda socdaalka iyo soo-galootiga ee dalka Noorway, Sylvi Listhaug (Frp) sawir: Larsen, HÃ¥kon Mosvold
Fritzon oo ka baaqsatay kulan wasiirka dhiggeeda ee Noorway
La daabacay tisdag 29 augusti 2017 kl 14.23
Wasiirradda socdaalka Sweden, Heléne Fritzon (S) ayaa dib uga laabatay kulan horay u qorsheeysnaa oo ay la yeelan lahayd dhiggeeda ee dalka Noorway Sylvi Listhaug oo ka tir-san xisbiga Fremskrittspartiet.
-Ma doonayo inaan qayb ka noqdo ololahan doorashada, sida ay sheegtay Fritzon iyadoona ay wasiiraddu intaa raacisay in Listhaug ay dalkan u timid "sidii ay Sweden uga baahin lahayd sawir khaldan".
Kolka ay soo caga dhigato Sweden wasiiradda socdaalka iyo soo-galootiga Noorway Sylvi Listhaug oo ka tir-san xisbiga Fremskrittspartiet waxay ogaatay in kulankii ay la yeelan lahayd wasiirka socdaalka Sweden Heléne Fritzon oo toddobaadyo ka hor la qorsheeyey aanu qabsoomi doonin. Listhaug ayaan lagu war-gelin sababta uu kulankaasi u qabsoomi waayay.
- Wasiirradda waydii go’aankaa waxa ka dambeeyay, balse waxaan hubaa iney dhici karaan waxyaabo aan la fileeyn, sida ay u sheegtay suxufiyiin ka socday dalka Noorway mar ay booqasho ku mareeysay daarta ciidanka ammaanka ee Stockholm.
Xaalad xeer la’aan
Sylvi Listhaug ayaa boqasho ku joogta dalka Sweden sidii ay wax uga ogaan lahayd xaaladda siyaasadda is-dhex galka iyo xaafadaha ey ku dhaqan yihiin dan-yartu. Iyada oo kulammo la qaadan doonta dadyoow ey ka mid yihiin madaxa ciidanka ammaanka Dan Eliasson sidii ay sawir uga qaadan lahayd howlaha ciidanka ammaanka ee la xiriira, isla markaana maanta booqasho ku tegi doonta xaafadda Rinkeby. Hase yeeshee sida ay sheegeen qaar ka mid ah saxaafadda Noorway in booqashadi ay ka mid tahay olilaha doorashada ee Listhaug. Sida ay u sheegtay war-geeyska VG ee ka soo baxa dalka Noorway waxay sheegtay in booqashadeedani salka ku hayso sidii ay ku arki lahayd xaaladda kolka uu waddan qaabilo qaxooti fara badan oo uu ku guul-darreeysto is-dhex galka.
-Halkan uma aanan iman gardarro ee waxaan u imid inaan arko waxyaabaha aan loo baahneyn in dalka Noorway laga sameeyo, sida ay sheegtay Listhaug.
Listhaug ayaa war-geeyska ku sii barbalaarisay mawduuceeda. Waxaa ay sheegtay inuu dalka Sweden yahay mid kala faqooqan oo ey ka jiraan lixdameeyo xaafadood oo aan la geli karin "no-go-zoner" halkaasina oo lagu guul-darreeystay siyaasaddii is-dhex galka, oo ey sharci darro ka jirto awooddana gacanta ugu jirto dembiileyaasha. Sawirkani ma ahan mid ay la qabto wasiirka socdaalka Sweden.
"Waa maalaa yacni"
Jawaab ay kaga bixisay VG ayay ku qortay Heléne Fritzon in maalmihii ugu dambeeyey ey soo shaac baxeen in booqashadani ka mid tahay ololihii doorashada isla-markaana ay Listhaug xiiseenayso inta badan sidii ay sawir khaldan uga faafin lahayd Sweden.
-Waxay ku caddahay wareeysigii ay maanta siisay war-geeyska VG, halkaasina oo ay ku sheegtay iney jiraan lixdameeyo xaafadood oo aan cagta la dhigi karin, ammaan darro aawadeed, waana ereyo maalaayacni ah oo aanay waxba ka jirin, sida ay ku qortay war-geeyska VG, wasiirka socdaalka Sweden Heléne Fritzon.
-Si dhib yar ayaan xaqiiqdii ula kulmi lahaa wasiirka dhiggeeyga ee dalka Noorway doorashada dabadeed, hase yeeshee ma doonayo inaan qayb ka noqdo doorashadan.